China igbu justgbanwe Kemeghi Elu Black Ogwe aka ezumike Guzosie rụpụta na Factory | MOLON
Ogwe aka izu ike
Akwa mma akpụkpọ anụ ogwe aka ezumike.
Kemeghi si 3 dị iche iche ihe.
Mfe ibu - Obere
Dabara na uwe ikpe!
Ezi Uche - Mpi
Inogide & Adịgide & Anụ
Nhọrọ Dị Mma maka Tlọ Ọrụ igbu egbugbu
Enwere ike ịhazi oche oche a na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe na-ewepụghị akụkụ ọ bụla.
Mbadamba igbe ahụ ka etinyere maka nkasi obi kasịnụ maka ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị.
Oche, ogwe aka, mpempe akwụkwọ na ihe mkpuchi nwere ike idozi.
Emdị :dị: Tattoo Armrest
Ihe: Metal + Faux Akpụkpọ anụ
Agba ihe: Black
Black Pad Size: odika. 22 x 17 cm / 8.7 x 6.7 anụ ọhịa
Kemeghi Elu: odika. 83-136 cm / 31.5-52.8 anụ ọhịa
Ndị ọkachamara na-egbu egbu egbugbu aka
Nwere ike ịgbanwe elu na armrest dị iche iche dị iche iche ọnọdụ.
Kpụrụ ergonomic na-enye gị ohere ịgbanwe ya n'akụkụ ọ bụla iji kwado ọrụ egbugbu ọ bụla.
Pịgharịa bọtịnụ ahụ wee pịgharịa ya wee laghachi n'akụkụ gị achọrọ. Ọ bụrụ na ọ bụghị pivot ma ọ bụ n'akuku naanị tilts n'ihu ma ọ bụ azụ
Ogwe aka a dị mfe iburu maka njem na maka igbu egbugbu.
Na-agbada n'ime iberibe atọ ma nwee nnukwu ibu na obere nnukwu
Ogwe aka a dịkwagidere ike ma dịkwa mfe ihicha.
Ofụri Esịt kemeghi na oké ọrụ
- Nro dị nro na nke dị jụụ maka ogwe aka, ụkwụ ma ọ bụ ụkwụ zuru ike.
- Usoro ergonomic na-enye gị ohere ịhazigharị ya n’akụkụ ọ bụla (karịa ogo 180) iji kwado ọrụ ọ bụla egbugbu.
- Kemeghi elu dị iche iche mkpa.
- Nro dị nro na nke dị jụụ maka ogwe aka, ụkwụ ma ọ bụ ụkwụ zuru ike, na-eme ka nkasi obi ndị ahịa na-abawanye.
- tripod guzoro ọnọde ọzọ otu ebe na-abụghị ileghara (Metal ụkwụ na roba nsọtụ).
- Portable na foldable, mfe maka nchekwa ma ọ bụ na-ebu.
【Ọkachamara】 Ndị ọkachamara na-eme ka egbugbu aka na ụkwụ izu ike, nkedo dị nro na nke dị nro na-enye gị nkasi obi maka ogwe aka, ụkwụ na ụkwụ izu ike, na-eme ka igbu egbugbu gị dịkwuo mfe.
Ight Elu nwere ike idozi】 E nwere ike gbanwee ịdị elu site na 65cm ruo 125cm iji dabara mkpa gị dị iche iche, na-enye gị na ndị ahịa gị nnukwu ahụmịhe. Ike dị ike, ogwe aka nwere ike inye nkwado zuru oke maka ndị nwere ibu dị iche iche
【Kemwepu】 A na-egbu egbu ogwe aka a dị mfe, na-adị mfe ịchekwa ma na-ebu, na-echekwa gị ohere nchekwa ebe ị na-adịghị mkpa njem njem. Pad ahụ na-enye gị ohere ịgbanwe karịa ogo ogo 180 maka ọrụ egbugbu ọ bụla.
【Anti-skid】 Tripod metal ụkwụ na roba nsọtụ na-enye nkwụsi ike maka igbu egbugbu, Anti-skid na-enweghị ọkọ ala, na-arụ ọrụ ma na-adịgide adịgide. Ngwaahịa zuru oke maka tattoolọ Mmanya ọkachamara ọkachamara ma ọ bụ onye na-ese ihe osise.
Ọrụ Onwe-Otu】 Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ihe anyị, biko kpọtụrụ anyị site na email. Obi dị anyị ụtọ inyere gị aka idozi nsogbu ahụ. Ahụkebe ndị ahịa bụ naanị ihe anyị na-eme!
Nke gara aga: KingKong 3 igbu Cartridge Machine
Osote: Disposable silicone mgbanwe tattoo igbu katrij adịgide (25pcs / igbe)
Kemeghi Elu igwe anaghị agba nchara Tattoo Ogwe aka Re ...